Sunday September 03, 2017 - 16:39:13 in Wararka by Super Admin
(Rating 3.8/5 Stars) Total Votes: 6
Mu'asasada Warbaahineed ee Al-Kataa'ib ayaa baahisay Filim xiisa badan oo lagu soo bandhigayo Muhiimadda uu leeyahay dagaalka Xarbul-Cisaabaatka (Ku Dhufoo Ka Dhaqaaq) iyo miradhalka uu ka sameeyey shantii sano ee la soo dhaafay.
Filimkan oo la daawan karo muddo ka badan 30 daqiiqo ayaa soo bandhigaya sida Ciidamada qalabeysan ee AMISOM iyo Gawaaridooda gaashaaman ay beylah ugu noqdeen weerarada Xarakada Al-Shabaab markii laga soo fogeeyey xeryihii Muqdisho ee ay ku jireen shantii sano ee ugu horeysay ee duullaankooda.
Wuxuu Filimku soo bandhigayaa Weeraro toos ah, Qaraxyo lagu burburinayo gawaarida gaashaaman iyo Weeraro dhabagal ah oo lagu xasuuqayo ciidamada midowga Africa iyo kuwa Soomaalida.
Isdaarkan cusub ee Alkata'ib soo saartay waxaa lagusoo bandhigaa weerarkii khasaaraha badan lagu gaarsiiyay ciidamada shisheeyaha AMISOM ee ka dhacay deegaanka Golweyn ee sh/hoose.
Filimkan oo ku baxaya laba luuqadood waxay Al-kataa’ib ku soo bandhigi doontaa Faa’idada Xarakada Al-Shabaab ay ka heshay isbedal dagaalkeedkii ay ku dhawaaqday sanadkii 2011-kii markii ay difaacyada u baneysay ciidamada AMISOM kana soo baxday caasimadda.
Si toos ah udegso MP4